उपभोक्ता मैत्री छ खानेपानी संस्थान : महाप्रबन्धक डा. भूपेन्द्र – सुनाखरी न्युज
उपभोक्ता मैत्री छ खानेपानी संस्थान : महाप्रबन्धक डा. भूपेन्द्र
Posted on: November 6, 2020 - 6:06 pm
सुनाखरी न्युज/ पोखरा -नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक डा. भूपेन्द्र प्रसादले संस्थानले उपभोक्ताहितमा काम गरिरहेको बताएका छन् । पानी शुद्धिकरण आयोजनाको निरीक्षण गर्न पोखरा आएका डा. प्रसादले सिंगो महानगरलाई सेवा दिन संस्थान लागिपरिरहेको बताए । डा.प्रसादले शुक्रबार नेपाल खानेपानी संस्थान सेतीपारी शाखा अन्तर्गत आभाष भवन विस्तारसहित शिलान्यास गरेका छन् ।
शुक्रबार भवन क्षेत्रमा भूमि पुजा गर्दै संस्थानका महाप्रबन्धक डा.भूपेन्द्र प्रसादले उपभोक्ताका हितमा काम भएको बताए । डा। प्रसादले पोखरा महानगर १०, ११, १२, १३, १४, १५ लगायत क्षेत्रका नागरिकलाई सेवा लिन सहज हुने बताए । पोखरा १२ माटेपानीको ओभरहेड ट्याङ्की क्षेत्रमा बन्ने भवनले आगामी दिनमा उपभोक्तामैत्री बन्न सहज हुने उल्लेख गरे । पोखरामा निर्माण चलिरहेको पानी शुद्धीकरण आयोजनाको अवलोकन, पोखरा महानगर लेखनाथ क्षेत्रमा रहेको खानेपानी उपभोक्ता समितिसँगको छलफल र क्षेत्रीय कार्यालय स्थापनाको योजनामा आएका महाप्रबन्धक डा। भूपेन्द्रले संस्थानको आकार फैलिएको बताए । नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयबाट हालै विभिन्न सहरमा शाखा विस्तारको योजना स्विकृतिको क्रममा रहेको उल्लेख गरे । लेखनाथ साना सहरी खानेपानी कार्यालयमा विरगञ्ज शाखाका प्रमुख ईन्जिनियर निरण महर्जन, पोखरा शाखाका कार्यालय प्रमुख ई। आशिष कार्की, हेमजा शाखाका प्रमुख दिनेश्वरप्रसाद यादव, इन्जिनियर सन्तोषकुमार दाससहितको टोली पुगेका महाप्रबन्धक डा। प्रसादले लेखनाथवासीको सेवामा संस्थानले प्राथमिकता दिने बताए ।
उपभोक्ता हितमा २०७५ असार मसान्तसम्म कुनै कारणले पानी महशुलको बक्यौता रहेकालाई २०७७ माघ मसान्तसम्म जरिवानामा दिएको छुटको फाइदालिन पोखरेली उपभोक्तालाई अनुरोध गरे । कात्तिक १ गतेमात्र महोत्तरीको गौशाला शाखाको नयाँ भवन उद्घाटन गरेका महाप्रबन्धक डा। प्रसादले हेमजा शाखा भवनलाई छिटो कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । यसैबीच नेपाल खानेपानी संस्थानमा जोडिन मजुवावस्तीका करिव ६ सय धाराका उपभोक्ता सहमत भएका छन् । मजुवाबस्ती, सराङ्कोट, चाउथे लगायत क्षेत्रका उपभोक्ता खानेपानी संस्थानमा संगठित हुने क्रम चलिरहेको पोखरा शाखाका प्रमुख आशिष कार्कीले जानकारी दिए ।